Job 28 | Shona | STEP | Nokuti mugodhi uripo panobva sirivha, Nzvimbo iripo pavanonatsa ndarama.
Munhu anoziva hake zvizhinji panyika, asi njere chaidzo ndedzaMwari oga
1 Nokuti mugodhi uripo panobva sirivha, Nzvimbo iripo pavanonatsa ndarama. 2Mhangura inocherwa pasi, Nendarira inonyauswa pabwe. 3Munhu anokunda rima, Anotsvakisisa kusvikira kumativi ose-ose. Mabwe ari murima guru nomumumvuri worufu. 4Anochera mugodhi kure napanogara vanhu; Vanokanganikwa norutsoka rwavanopfuura; Vanorembera kure navanhu, vachizeya uku nokuku. 5Kana iri nyika, zvokudya zvinobva mairi; Pasi pazvo pakashandurwa zvinenge nomoto. 6Pamabwe ayo ndipo panogara zvibwe zesafiro, Ano upfu hwéndarama. 7Nzira iyo haizikanwi negondo, Ziso rorukodzi harina kuiona; 8Zvikara, zvinozvikudza, hazvina kupfuura napo. Shumba, ine hasha, haina kupfuura napo.
9Iye anotema dombo romusarasara noruoko rwake; Anoshandukura makomo nemidzi yawo. 10Anochera mugero pamatombo; Ziso rake rinoona zvinokosha. 11Anodzivira nzizi dzemvura dzirege kudonha; Chinhu chakavanzika anochibudisa pachena. 12Asi uchenjeri huchawanikwepiko? Kunzwisisa kunogarepi? 13Munhu haazivi mutengo wahwo; Hauwanikwi panyika yavapenyu. 14Pakadzika panoti, "Hauzi mandiri;" Negungwa rinoti, "Hauzi mandiri." 15Haungatengwi nendarama, Nyangwe nesirivha haingaidzirwi mutengo wawo. 16Haungaenzaniswi nendarama yeOfiri, Kana nezvibwe zveonikisi inokosha kana zvesafiro. 17Ndarama negirazi hazvingaenzani nahwo; Zvishongo zvendarama yakaisvonaka hazvingatsinhaniswi nahwo. 18Korari nemapere hazvingatongorebwi; Zvirokwazvo mutengo wouchenjeri unopfuura matombo akatsvuka. 19Topazi yeItiopia haingaenzani nahwo, Haungaenzaniswi nendarama yakaisvonaka. 20Zvino huchenjeri unobvepiko? Kunzwisisa kunogarepi? 21Zvahwakavanzirwa meso avapenyu vose, Nokudzitirirwa shiri dzokudenga. 22Kuparadza noRufu zvinoti, "Takanzwa guhu rahwo panzeve dzedu." 23Mwari anonzwisisa nzira yahwo, Ndiye anoziva kwahunobva. 24Nokuti anotarira kumigumo yenyika, anoona, zvose pasi pokudenga pose; 25Panguva yaanotarira mhepo kurema kwayo; Zvirokwazvo, anoyera mvura nechiyero 26Panguva yaakatemera mvura chirevo, Nemheni yomutinhiro nzira yayo. 27Panguva iyo akahuona, akahududzira; Akahusimbisa, nokuhunzvera. 28Akaudza munhu achiti, "Tarira, kutya Ishe, ndihwo uchenjeri. Kurega zvakaipa ndiko kunzwisisa."